အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: Are you smart or NOT?
Posted by တီချမ်း at 8:16 PM
jr.lwinoo July 18, 2010 at 9:33 PM
"တကယ်တန်းကျတော့ တကယ်တော်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ အဆင့် ၁ မရကြဘူး (ကိုယ့်လိုပေါ့) ။ "
ကြိုက်တယ် ဂျီးဒေါ်.. :)
tune July 18, 2010 at 10:58 PM
ဒီပို့စ်လေးတွေးတော့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် မန့်ချင်လာတယ်။
ဂျီတော့ခ်မှာ ပြောလဲ ကော်ပီ အန် ပေ့စ်က လုပ်ချင် လုပ်ဦးမှာ မဟုတ်လား။
မထူးဘူး ဒီမှာပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်။
တော်တာ မတော်တာကို အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တာ လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။
တလောလေးက ဖတ်လိုက်ရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မတော်ဘူးလို့ ထင်တဲ့သူတွေက ပိုကြိုးစားတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်တယ်၊ အဲဒီလိုနဲ့ အဆင်ပြေသွားကြတာ။
တချို့သူတွေက ကိုယ် မတတ်လို့ မတတ်မှန်းတောင် မသိဘူးတဲ့။
ပြီးတော့ တွေးမိတာက ကိုယ်တော်ကြောင်း သက်သေပြရမှာ ဆိုးရွားတဲ့ သက်သေပြနည်းက သူများ မတော်ကြောင်း အပြစ် ထိုင်ရှာတာ။
ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုတော်အောင် မကြိုးစားဘဲ တော်နေတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေကို ဆွဲချ၊ ပြဿနာရှာ၊ အပြစ်လိုက်ရှာ အဲဒီလိုနဲ့ အချိန်ကုန်ခံနေတာ။
အဲဒါမျိုးတွေ မြင်ရရင် အရမ်းကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။
Rita July 19, 2010 at 8:14 AM
ဘယ်သူတော်တော် မတော်တော် ကိုယ် စိတ်ချမ်းသာရင် ပြီးတာပဲ။ ကိုယ်ကတော့ မပင်မပန်း အိပ်ရေးဝဝ အိပ်နေရရင် စိတ်ချမ်းသာတယ်။
thet July 20, 2010 at 1:59 AM
အတွေးလေး ၁ ခု ရသွားတယ်။ ကျေးဇူးးးးးးးးးးး
အန်တီချမ်း July 21, 2010 at 12:05 AM
Hnin Su - နင့်ရဲ့ ဒီပို့စ်က အတွေးလေးကို ငါ တော်တော်သဘောကျတယ် . . .
အင်း . . . ငါ့လိုပေါ့ အရာရာမှာ တော်နေပြီး အချစ်ရေးမှာ မတရားတုံးအနုံချာနေတာ . . အဟိ အဟိ . . .9:04 pm